Tranonkalan’Olona Anisan’ny Maharikoriko Indrindra Nahazo ny Fon’ny Olona Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2016 6:26 GMT
Ilay mpiherongeron'ny RuNet mitady fangorahana, mitady fiovana. Sary: YouTube
Nahazo hetsika fangoraham-po mamy indrindra teo amin'ny tantaran'ny RuNet ankehitriny ny iray amin'ny maharikoriko indrindra, any amin'ny zoro lavitry ny fahalalahan-tanana indrindran'ny aterineto rosiana—tranonkala iray vao nanaovan'ny mpankasitraka fanafihana an-tserasera [mg] voarindra vao tamin'ny herinandro hamoahana avy any amin'ny miafina ireo vehivavy hita tany amin'ny sary vetaveta.
Vao maraimben'ny 28 avrily , nanomboka nirotsaka tsikelikely tao amin'ny YouTube, hanondraka “likes” [sitraka] video tokana sy fanehoan-kevitra fanohanana ny mpiserasera rosianan'ny imageboard “Dvach” (2chan). Ny video dia an'ny vehivavy iray manana fahasembanana monina ao Kazakhstan izay manondro ny tenany ho Yelena Ovechkina. Tamin'ny faran'ny volana marsa izy niantso ny World Wide Web [ny Tahalaben'ny Tranonkala] tamin'ny kabary manohina fo maharitra roa minitra, mandresy lahatra fa “olona ihany koa ny sembana”. Nandritra ny lahatsary i Ovechkina no nangovitra sy nitagataga, nitsiky sy hita ho miady mafy tsy ho latsa-dranomaso.
Mpiseran'ny Dvach iray no nanintona ny fiarahamonina tamin'ilay video, nilaza fa hitany kisendrasendra ny lahatsary. Ny volana nanaraka ny namoahan'i Ovechkina ny lahatsariny, dia ity mpiserasera ity ihany no hany tokana tao amin'ny YouTube ho nijery izany. “Fotoana fohy monja, nalahelo aho,” hoy izy niteny tamin'ny namany mpiseran'ny Dvach, nanazava ny toe-draharaha ary nametraka dikasary mampiseho fa iray ihany no mba nijery izany. “Mba manorata teny mamy hoan'ity vehivavy ity eo amin'ny zoro fanehoan-kevitra,” hoy ny fiangaviany. “Iray segondra monja, andao mba ho tsara fanahy kely kokoa. Tsy mila fandrahonana.”
Amin'izao fotoana anoratana [amin'ny teny anglisy] izao dia nahazo mpijery mihoatra ny 15.700 ny lahatsarin'i Ovechkina [ mihoatra ny 124.800 tamin'ny nandikana azy ho amin'ny teny malagasy] ary mbola mihamaro ihany ireo mirotsaka mankao. Efa 3.720 ihany koa ankehitriny ny “masaka” ary 612 ny fanehoan-kevitra. Ny “fanehoan-kevitra an-tampony” nalahatry ny YouTube dia hafatra manafana fo tahaka ny “Maniry ny tsara indrindra ho anao! Arahaba avy amin'i Irkutsk!” “Tsarà vintana ianao!” ary “Vehivavy mahafinaritra ianao!”
Nilaza i Ovechkina fa avy any Karaganda, tanàna fahaefatra lehibe indrindra ao Kazakhstan. Ny hany video YouTube hafa ahitana azy dia izy nandao ny tranony, izay ahitana fiezahana mafy miala avy amin'ny sezakodiarany mandray ny tehiny roa, handeha hidina ny tohatra amin'ny tranobe onenany. (Tsy nahitana fanaka-drihana mandeha tao.) Nilaza i Ovechkina fa tiany ny aterineto, indrindra rehefa io no ahafahany mifandray amin'ireo olona sembana mitovy aminy sy ahalalàny bebe kokoa ny fiainan'izy ireo. Saingy mahakivy ny ankamaroan'ny fampahafantarana hita momba ny olona sembana mitaraina izy ary izany no nahatonga azy nanapa-kevitra ny handrakitra lahatsary hiresaka ny fiainany manokana, izay lazainy fa ao anatin'ny fiainan-tsambatra. “Te-hampiseho ny ambadiky ny fiainan'ny olona sembana aho. Mazava fa tsy hoe ratsy, mafy ary mampalahelo izany,” hoy izy nitsiky.